Adblock Plus for Samsung Internet - Browse safe. 1.2.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.2.0 လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က
Application မ်ား ဆက္သြယ္ေရး Adblock Plus for Samsung Internet - Browse safe.
Adblock Plus for Samsung Internet - Browse safe. ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
"ဒီနေရာမှာ Adblock Plus ကို re-ထင်ဟာသူ့ရဲ့အဓိကအဆိုပြုဖို့ကြော်ငြာစက်မှုလုပ်ငန်းအတင်းအကျပ်ဖြစ်ပါတယ်" - MediaPost
ExtremeTech ရဲ့ - "Non-နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလူတွေကိုသူတို့တွေ့မြင်မိုဘိုင်းဝက်ဘ်ကြော်ငြာများ၏အရေအတွက်ကိုလျှော့ချရန်နှင့်လူသိများ malware ကိုက်ဘ်ဆိုက်များမှမိမိတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်အဘို့အ iOS နှင့် Android များအတွက်ဒီနေရာမှာ Adblock Browser ကိုလွယ်ကူစေသည်"
"ဝဘ်ဖျက်ဆီးမှကြော်ငြာထားရန်ကြိုးစားနေများအတွက်ဒီနေရာမှာ Adblock ကောင်းကြီးပေး" - Gizmodo
ဒီနေရာမှာ Adblock Plus, Desktop browser များများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးကြော်ငြာ blocker နောက်ကွယ်မှအဖွဲ့ထံမှ Samsung ကအင်တာနက်ကိုများအတွက်ဒီနေရာမှာ Adblock Plus သင်သည်သင်၏ Samsung ကအင်တာနက် browser ပေါ်မှာကြော်ငြာတွေပိတ်ဆို့နှင့်သင် Desktop ပေါ်မှာလုပ်ပေးအဖြစ်စင်ကြယ်သော web browsing ကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
မှတ်ချက်: Samsung ကအင်တာနက်ကို 4.0 သို့မဟုတ်အထက်ဒီ app ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါသည်
အသုံးပြုမှုလွယ်ကူ ။ သငျသညျသှားဖို့ကောင်းသောနေမတိုင်မှီက Samsung ကိုအင်တာနက်များအတွက်ဒီနေရာမှာ Adblock Plus ကိုသာရိုးရှင်းတဲ့ setup ကိုလိုအပ်သည်။ ရိုးရှင်းစွာအ Samsung ကအင်တာနက်ကိုများအတွက်ဒီနေရာမှာ Adblock Plus အားပွင့်လင်း Samsung ကအင်တာနက်ကို install "Settings" ကို navigate - "extension" - "အကြောင်းအရာ blocker" နှင့်ဒီနေရာမှာ Adblock Plus ကိုသက်ဝင်စေပါ။ ဒီနေရာမှာ Adblock Plus ကို setting များကိုဒီနေရာမှာ Adblock Plus app ထဲမှာသည့်အချိန်တွင်မဆိုပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။
privacy ကို, လုံခြုံရေးနှင့်သုံးစွဲသူထိန်းချုပ်ရေးအပေါ်အာရုံစိုက် Samsung ကအင်တာနက်ကိုများအတွက်ဒီနေရာမှာ Adblock Plus ကိုအောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုကမ်းလှမ်း:
Block ကိုနှောင့်အယှက်ကြော်ငြာတွေ ။ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အချက်အလက်များနှင့်ဘက်ထရီသက်တမ်းချွေတာထိုကဲ့သို့သောဗီဒီယိုများပေါ်တွင်ကြော်ငြာများအဖြစ် block နှောင့်အယှက်များနှင့်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောကြော်ငြာတွေ, ။ ပုံမှန်အားဖြင့်, အလက်ခံကြော်ငြာပဏာမခြေလှမ်းများ၏တင်းကျပ်သောစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသောလေးစားမှုကြော်ငြာတွေကြီးမြတ်အကြောင်းအရာဖန်တီးသူကိုထောကျပံ့ကူညီပေးသည်သောပြနေကြသည်။ အားလုံးကြော်ငြာတွေပိတ်ဆို့ဖို့လိုပါသလား? ပြဿနာမရှိပါဘူး။ အသုံးပြုရလွယ်ကူတယ်ရွေးချယ်စရာသင်မြင်သောအရာကိုထိန်းချုပ်ခွင့်ပြုသည်။
လုံလုံခြုံခြုံကြည့်ရှုခြင်း ။ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောကြော်ငြာတွေပိတ်ဆို့ခြင်း "malvertising" ရောဂါကူးစက်မှု၏အန္တရာယ်ကို minimize လုပ်။ စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်ကအကြံပြု UC Santa Barbara နှင့် Samsung ကအင်တာနက်များအတွက် Electronic Frontier Foundation က, ဒီနေရာမှာ Adblock Plus ကိုလူသိများ malware ကို domains များပိတ်ထားနိုင်နှင့် malware လွယ်ကူသောကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်စေသည်။
Enhanced privacy ကို ။ အနည်းငယ်ရိုးရှင်းတဲ့ဘုံဘိုင်အားဖြင့်သင်တို့ကိုခြေရာခံခြင်း disable နိုင်ပါတယ်။ Samsung ကအင်တာနက်ကိုများအတွက်ဒီနေရာမှာ Adblock Plus သငျသညျအမည်ဝှက်ဝဘ် browse နှင့်သင်၏အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုခြေရာခံရာမှကုမ္ပဏီများကရပ်တန့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Added အသုံးပြုသူထိန်းချုပ် ။ သင်, ခြေရာခံခြင်း disable အားလုံးသို့မဟုတ်အချို့ကြော်ငြာတွေပိတ်ဆို့, filter ကိုစာရင်းထည့်သွင်း, whitelist ထဲတွင်က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာခလုတ်နဲ့ anti-ကြော်ငြာပိတ်ဆို့ခြင်းမက်ဆေ့ခ်ျ disable လုပ်ဖို့ကိုရွေးချယ်ပါ။
လျှောက်လွှာဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး install အသုံးပြုပုံကိုသင် သုံးစွဲမှုစည်းမျဉ်းများ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သဘောတူသည်။ https://adblockplus.org/terms
ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ: အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ဒီ app ကိုအသုံးပြုဖို့လိုအပ်သည်
တစ်ဦး bug ကိုတွေ့သည်သို့မဟုတ် ကိုကူညီလိုပါသလား? support@adblockplus.org မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ
https://adblockplus.org/ မှာ Samsung ကအင်တာနက်ကိုများအတွက်ဒီနေရာမှာ Adblock Plus ကိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ
Facebook မှာ: https://www.facebook.com/adblockplus
YouTube ကို: https://www.youtube.com/user/AdblockPlusOfficial
Instagram ကို: https://instagram.com/adblockplus/
LinkedIn တို့: https://www.linkedin.com/company/adblock-plus/
Adblock Plus for Samsung Internet - Browse safe. အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Adblock Plus for Samsung Internet - Browse safe. အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Adblock Plus for Samsung Internet - Browse safe. အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Adblock Plus for Samsung Internet - Browse safe. အား အခ်က္ျပပါ
dalon စတိုး 12.66k 3.13M
Adblock Plus for Samsung Internet - Browse safe. ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Adblock Plus for Samsung Internet - Browse safe. အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.2.0
ထုတ်လုပ်သူ Eyeo GmbH
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://adblockplus.org/privacy
App Name: Adblock Plus for Samsung Internet - Browse safe.
Release date: 2019-09-02 19:01:31
လက်မှတ် SHA1: 5F:8F:93:E7:13:52:01:45:5B:82:B5:43:34:73:8F:D4:6B:59:39:AC
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Adblock Plus
အဖွဲ့အစည်း (O): Adblock Plus
Adblock Plus for Samsung Internet - Browse safe. APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ